प्रेम दिवशकै दिन कन्चन पुगे कोमामा, दियो निभ्न लाग्यो भन्दै अनिशालाई निरूको यस्तो सन्देश (भिडियो सहित) -
Home News प्रेम दिवशकै दिन कन्चन पुगे कोमामा, दियो निभ्न लाग्यो भन्दै अनिशालाई निरूको...
प्रेम दिवशकै दिन कन्चन पुगे कोमामा, दियो निभ्न लाग्यो भन्दै अनिशालाई निरूको यस्तो सन्देश (भिडियो सहित)
चितवनका कन्चन तिमल्सिना र अनिशा कुमालको प्रेम प्रशंगले यतिबेला निक्कै चर्चा बटुलेको छ । कारण उनीहरुले काठमाडौँमा गएर विवाह गरेपछि अनिशा आफ्नै घर फर्किएपछी कन्चनले वि,ष पिएर आ’त्मह’,त्या गर्ने प्रयास गरेका थिए ।
विवाह गरेर पुन: घर फर्किएकी अनिशा यस विषयमा स्पष्ट पार्न मिडियामा समेत आएकी थिइन । अनिशाका अनुसार उनीहरुको चिनजान फेसबुक मार्फत भएको थियो । विस्तारै उनीहरुको फेसबुक मै मायाको कुरा भएको स्वि,कारिन । तर अनिशाले विवाह नै गर्ने भनेर स्वीकार न,गरेको बताएकी थिइन । कन्चनले काठमाडौँ लगेर ज,वर्जस्ती सिन्दुर लगाईदिएको समेत उनले बताएकि थिइन ।
अनिशाको परिवारले छुट्टाईदिने भन्दै कन्चनले ज,बर्जस्ति सिन्दुर लगाई दिएको परिवारले पनि आ,रोप लगाएकि थिइन । कन्चनले ज,वर्जस्ती सिन्दुर लगाएको फोटो खिचे पछि मात्र घर पुर्याईदिने भने पछी आफुले त्यसो गरेको अनिशाले बताइएकि थिइन । तर यता कन्चनका परिवारको भने अर्कै दावी रहेको थियो। कन्चनका आमाका अनुसार अनिशाले धोका दिए पछि आफ्नो छोराले आ’त्मह’,त्या गर्ने कोशिस गरेको हो । अहिले कन्चनको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ।
तर अहिले पछिल्लो समय कन्चनको अवस्था झनै बिग्रीएको छ । उनलाई अहिलेसम्म तीन पटक त भेण्डिलेटरमै राखिसकिएको छ । कन्चनको पछिल्लो अवस्थालाई लिएर उनलाई उपचार गरिरहेका डाक्टर प्रदिप पनि निकै नै निरा,श भएका छ्न । अब त अहिले उनको अवस्था निकै नै नाजुक भएको छ । अन्ततः निभ्नै लागेका छन कन्चन । आज भोलि भन्दा-भन्दै अब एकदमै थोरै समय मात्र बाँच्ने सम्भावना रहेको छ । उनको अन्तिम अवस्थालाई हेर्न अस्पताल पुगेकी निरु गौतम कन्चनकि आमा संगै भक्कानिएकी छिन ।
उनको यस्तो छ अवस्था एकपटक हेर्नुहोला ।
Previous articleफरार बिनयजंग बसपार्क पक्रा’उ ! सपना भन्छिन सत्यतत्थ अब बाहिर आउँछ Binya Vs Sapana
Next articleरुसले भर्खरै दियो नेपाललाई यस्तो ’सरप्राइज’ ! प्रधानमन्त्री ओली समेत चकित् !Nepal & Russia.